December 2018 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Halkaan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada
guuleed	 Dec 31, 2018 0
Dhuuxa Wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Halkaan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 31 12 2018
cusmaan	 Dec 31, 2018 0
War deg deg ah oo naga soo gaaraya magaalada Baardheere oo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gedo ayaa ku waramaya in maamulka degmadaas ee ka amar qaata Axmad Madoobe ay dileen dhowr ruux oo ku jiray xabsiyada maamulkaas. Ugu…
Banaanbaxyada dalka Suudaan oo weli socda, iyadoona dadku codsanayaan inuu is casilo Al-Bashiir.
Magaalooyin badan oo katirsan wadanka Suudaan waxaa ka socoanaya dibad baxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka shacabka, kuwaas oo kasoo horjeeda xukuumadda uu hogaamiyo Cumar Xasan Al-bashiir. Maalintii shalay iyo manta waxaa dhacaya…
Sarkaal katirsan ciidamada dowladda Oo Muqdisho Lagu Toogtay.
Cabdi Maxamed Culusow (Cabdi Madoobe) oo kamid ahaa saraakiisha ciidamada dowladda ayaa saaka lagu dilay qeybo kamid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Rag hubeysan oo katirsan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta…
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dhageyso Warka Subaxnimo ee Radio Al-furqaan. Halkan Ka Degso Warka subaxnimo 31 12-2018
Xillibaanno ka badbaaday Weeraradii Madaxtooyada Oo Muqdisho Ku geeriyooday.
Magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday Xillibaanno katirsan Baarlamaannada dowladda federaalka iyo kan maamulka Koonfur-gableed ee uu hogaamiyo Lafta-gareen. Labada Xillibaan ee geeriyooday waxaa lagu kala magacaabaa Col. Ruush oo…
Rabshado ay dad ku dhinteen oo ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga CONGO.
Wadanka dhaca qaaradda Africa ee lagu magacaabo Jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo waxaa lagu dilay ugu yaraan 4 ruux, oo ay ku jiraan ciidamo iyo shaqaale katirsan dowladda. Maamulaha ol-olaha doorashada ee xisbiga mucaaradka ayaa…
cusmaan	 Dec 30, 2018 0
Dhuuxa Wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Halkan Ka Degso Dhuuxa wareysiyada 30-12-2018
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay, dhageyso Warka Duhurnimo ee Radio Al-furqaan. Halkan Ka Degso War duhur 30 12-2018
Howlgallo Kala duwan Oo xalay ka dhacay Shabeellaha-hoose.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay waxay markale weerar ku qaadeen fariisimiyaal degmada Afgooye ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka. Dagaalka oo dhacay xalay waxaa la isku adeegsaday hubka…